अष्ट्रेलियामा नेपालीहरुको साझा महासंघ खोल्ने विषयमा छलफल - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २ श्रावण २०७३, आईतवार ०३:५७ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियामा नेपालीहरुको साझा महासंघ खोल्ने विषयमा भिक्टोरिया राज्यमा दोश्रो चरणको छलफल सम्पन्न भएको छ ।
महावाणिज्यदूतको कार्यालयमा महासंघ टास्क फोर्स भिक्टोरियाको तर्फबाट संयोजकहरु बम योञ्जन र डा. राजु अधिकारीले आयोजना गर्नुभएको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेप्लीज एशोसिएसन अफ भिक्टोरिया न्याभका अध्यक्ष डा. अनुपम पोखरेल , एनआरएन भिक्टोरियाका संयोजक केशव कँडेलले अहिले अस्तित्वमा रहेका संघ संस्थाको उद्देश्यलाई समेत सहयोगी बन्ने किसिमले यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
यसैगरी छलफलमा सहभागी अन्य विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि योजनागत रुपमा यसलाई परिपक्व तवरबाट अघि बढाइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अगुवा जोग लिम्बुले हरेक संस्था निर्माणको बेलामा सानातिना विवाद आएपनि यसको आवश्यकतालाई बोध गरी सकारात्मकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । यसैगरी भिक्टोरियाका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत चन्द्र योञ्जनले महासंघको औचित्यका विषयमा धेरै छलफल भइसकेको भन्दै अब यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले यसका लागि भिक्टोरिया राज्यमा दर्ता भएका नेपाली समूदायसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाको संयूक्त छलफल आयोजना गरेर यस विषयको टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । छलफलका क्रममा आउने नकारात्मक कुराहरुलाई मात्र नउठाई समग्रतामा यसको भविष्य र यसले नेपाली समूदायका सबै सदस्यका निम्ति खेल्ने सहयोगी भूमिकामा केन्द्रित रहेर अघि बढ्न उपर्युक्त हुने उहाँको सुझाव थियो ।
यसअघि न्यूसाउथवेल्समा पनि यस्तै किसिमको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय, राज्य र संघीय तहमा संस्थाको संरचनाको विषयमा न्याभका पूर्वअध्यक्ष सुधिर शाक्यले आफ्नो अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी डा। राजु अधिकारीले समेत यसअघि प्रस्ताव गरेको अवधारणापत्र छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै सिड्नीमा गतसाता भएको कार्यक्रमको विषयमा अवगत गराउनुभएको एमएन टिभीले उल्लेख गरेको छ ।
Previousमेलबर्नमा आज भानु जयन्ती र लेखक अमर न्यौपानेसँग साक्षात्कार
Nextदेउवा र प्रचण्डको दबाबमा गुगल व्वाइलाई एक करोड दिइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ